> Resource> iPod> Olee ka mmekọrịta Photos ka iPod
Bụ iTunes nanị ụzọ nke na-abịa gị n'uche mgbe syncing foto iPod? N'eziokwu, iTunes-enyere gị aka mmekọrịta photos ka iPod Photo Library, na-eleghara na ị hapụ foto kwukwara na mbụ. Otú ọ dị, gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmekọrịta gị foto gị iPod na-ejigide aga na photos n'out oge? Ọ bụrụ na ị na-enweghị echiche, i nwere m aro ebe a: Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ma nsụgharị na-enye gị ike ka mmekọrịta gị foto gị iPod na na-na aga photos. Ke adianade do, ị nwere ike ịmepụta ọhụrụ albums n'okpuru Photo Library ịzọpụta synced photos.
Download a usoro na PC gị. Na-ahọrọ nri version.
Olee otú mmekọrịta foto iPod
Na akụkụ n'okpuru, anyị ga-elekwasị anya na windows version, nke ahụ bụ Wondershare TunesGo. Iji Mac ọrụ, ị nwekwara ike lelee nduzi n'okpuru na mgbe ahụ na-yiri nzọụkwụ na Mac version - Wondershare TunesGo (Mac).
Cheta na: Na Wondershare TunesGo, ị nwere ike mmekọrịta foto iPod aka, iPod nano, iPod kpochapụwo na iPod ịkpọgharịa. Lelee ọmụma zuru ezu banyere akwado iPod na ụdị na-akwado iOS.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPod ka a PC na iPod si eriri USB
Na mmalite, wụnye a usoro na PC gị. Ẹkedori ya. Jikọọ gị iPod ka a PC site na iji iPod si eriri USB. Gị iPod ga-ozugbo achọpụtara ka anya dị ka ọ na-ejikọrọ. Mgbe ahụ, gị iPod ga-egosi n'elu na isi window, dị ka screenshot-egosi n'okpuru.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta foto iPod
Na-ekpe sidebar, pịa "Photos". Mgbe ahụ Photo Library na igwefoto Roll nchekwa na-egosi na nri ebi ndụ.
Mepee Photo Library. Pịa "Tinye" iji bugote faịlụ nchọgharị window. Agagharị na kọmputa gị ruo mgbe ị na-ahụ na foto na ị chọrọ ka mmekọrịta. Mgbe ahụ, họrọ photos na pịa "Open" ka mmekọrịta ha.
Ọ bụrụ na ndị foto na ị chọrọ ka mmekọrịta nwere ụdị dị iche iche, ị nwere ike ịmepụta ọhụrụ albums n'okpuru Photo Library na-azọpụta ha. Na foto window, pịa "Tinye" ike ọhụrụ album. Nye ya aha na-akọwa. Wee mepee ọhụrụ album na mmekọrịta photos na ya.
Gbalịa TunesGo ka mmekọrịta gị foto gị iPod!